apuro anonzi arikurova beats headphone lineup
Kuru Nhau & Ongororo Apple inonzi iri kubvisa iyo Beats headphone lineup
Apple inonzi iri kubvisa iyo Beats headphone lineup
ZVIMWE:9To5Macyakaburitsa inopokana chirevo kuramba Apple & apos; s zvirongwa zvekuburitsa iyo Beats brand. Inoti zano iri 'harisi iro rinofanirwa kutariswa seriri patafura yeApple' uye rinoti kambani haina 'hurongwa hwekuitevera'. Iyo yekutanga nyaya inoenderera pazasi:
Beats Electronics yakawanikwa neApple muna2014 sechikamu chebvumirano hombe munhoroondo yayo. Iyo mhando yave kubva pasimba kuenda pasimba, asi mushumo mutsva na Jon Prosser inoratidza Apple ikozvino iri kugadzirira kusiya zita reBeats.
Taura hako nekurohwa mahedhifoni
Apple yakapinda musika yechokwadi isina waya yemhete nenhare huru muna 2016. AirPods dzakakurumidza kuve mafoni anotengesa zvakanyanya pasi pano, kunyangwe paine mutengo wakakwira, uye vachiri kubata zita rinokosha kwazvo nhasi.
Iyo kambani yakatevera vaviri vekutanga kumusoro neyechipiri-gen vhezheni munaKurume 2019 uye ruzha-kudzima AirPods Pro muna Gumiguru 2019. Izvi zvakabatsira Apple kutumira mamirioni 58.7 mamirioni egore rapfuura chete, izvo zvakapa iyo yakanakisa 54,4% chikamu chemusika pa data yemusika.
Apple yave kutenda kuti iri kushanda paBeatsX-senge AirPods X waya dzesimbi dzisina waya dzakabatana netambo yemitambo uye inomhanya. Peya ye premium pamusoro-nzeve mahedhifoni yakaderedzwa pamadhora mazana matatu nemakumi mashanu uye yakagadzirirwa kutora Bose neBeats pachayo iri mumabasa.
Kana zvigadzirwa izvi zvitsva zvaziviswa, pachave nekudyidzana kukuru pakati peApple neBeats misoro yetsamba. Ndosaka kambani inotungamirwa naTim Cook ichinzi iri kuronga kubvisa mutsara weBeats mugore rinouya.
Apple inoita kunge iri kuyedza kudzora hesera
Iyi chirongwa chenguva refu chinogona zvakare kutsanangura kuti nei Apple iri kupa zvikwereti zvikuru paBeats lineup izvozvi. Iyo Totally Wireless Powerbeats Pro, semuenzaniso, iri pasi pegore rimwe chete asi yakatoburitswa nehefty $ 50 pawebhusaiti yepamutemo.
Apple yatorawo danho rekudzikisa mutengo wayo weBeats Solo Pro pamusoro-nzeve mahedhifoni nemari yakafanana - $ 50.
Sechikamu cheichi chinoita senge chakanyanya kuyedza kudzora Beats hesera, Apple inonzwisiswa kunge iri kupa vashandi vayo zvidzikiso zvinosvika makumi mana muzana paBeats mahedhifoni lineup panguva ye COVID-19 denda.
Kunyangwe Apple iine chero zvimwe zvigadzirwa zveBeats kumusoro mahembe ayo e2020 zvinoramba zvichionekwa, asi ichangobva kuziviswa Beats Powerbeats 4 inogona kunge iri yekupedzisira Beats chigadzirwa pamberi pechiratidzo chekurega.
mitambo inoshandisa kubata kwe3D
sd kadhi muverengi yeApple
iphone oleophobic kupfeka kunopera
Vhidhiyo yepamutemo inokuratidza maitiro ekutengesa Pokemon muPokemon Go
Yakanakisa Samsung Galaxy Note 5 kesi
Global LTE inotsigira anotakura neiyo iPhone 5s uye 5c yeVerizon, AT & T, Sprint uye T-Mobile
InvisibleShield & apos; s nyowani yeGirazi Curve Elite skrini inodzivirira inogona kunge iri chinhu chakanakisa chakaitika kune yako Galaxy S8 kana Cherechedzo 8
Akanakisa Qi waya asina waya e iPhone 8
Huawei Tarisa 2 vs Samsung Gear S3 Frontier
Chii icho chisina kujairika chinhu pane ese ma iPhone 12 mamodheru?
Samsung Galaxy S6 Edge + vs LG G4